Filipina: Manome Voninahitra Ho An’ireo Maty Any Am-pasana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2017 0:56 GMT
Touched by an Angel manoritsoritra ny 1 Novambra miavaka eny amin'ny fasana:
Confessions of an Expat’s Wife, monina any Istambul, mba te hanao tahaka ity fomban'ny fianakaviana Filipiana ity:
Captain’s Log miresaka ny fomba nibilaoginy teny amin'ny fasana. Bikoy nandefa sary momba ny fomba nankalazana ny 1 Novambra eny ambanivohitr'i Filipina.
Filipino librarian nanome rohy mirakitra ny tantaran'ny Halloween sy izay hahitana toerana mampatahotra any Filipina. Nostalgia Manila manasongadina tantara malaza iray momba ny angatra ao an-drenivohitra izay ahitana ramatoa fotsifotsy ao Balete Drive. Araka ny filazan'ny olona fahiny, toerana ankafizin'ireo fanahy mirenireny sy ireo vondrona hafahafa ny hazon'i Balete. Iloilo City Boy mitantara ny fihaonany tamin'ireo angatra nandritra ny fampielezan-kevi-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2004.
Feisty Momma indray tezitra noho ny fahitana ireo ray aman-dreny mijanona ao anaty fiara raha mandondona eny am-baravaran'ny olona rehetra ny ankizy mandritra ny Halloween. Mirehareha amin'ny fitafiny Halloween any am-piasana kosa i Scribbles. Mitantara ny fomba nanaovan'i Manila (renivohitr'i Filipina) ny fomba fanao tandrefana nandritra ny Halloween i Cathy Chronicles: